FBC - Dhaabbileen addaddaa lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa Birrii miiliyoona 8 ol taasisan
Dhaabbileen addaddaa lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa Birrii miiliyoona 8 ol taasisan
Finfinnee, Caamsaa 11,2009(FBC) - Lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsi taasifamu Ganna sababii roobatiin akka addaan hin cinne hojjechaan jira jedhe Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa.
Koomiishinichi guyyaa har’aa ibsa laaten, deeggarsi lammiin lammiif taasisu cimee akka itti fufe eerera.
Koomiishinarri koomiishinichaa obbo Makoonnan Leenjisaan akka jedhanitti, lammiin naannichatti hongeen miidhame deeggarsa midhaan nyaataa argachaa jira.
Dhaabbileen addaddaas naannichatti lammiilee hongeen miidhamaniif deeggarsa maallaqaa taasisaniiru.
Yuunvarsiitiin Naannoo Oromiyaa Birrii 605,529, Yuunvarsiitiin Adaamaa Birrii miiliyoona 2, Dhaabbanni Bosonaa fi Bineensota Bosona Oromiyaa Birrii miiliyoona 1, Biiroon Qonnaa fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa Birrii miiliyoona 1.1, Biiroon Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Birrii 500,000, Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa Birrii 331,624, Intarpiraayiziin Hojiiwwan Bishaan Oromiyaa Birrii miiliyoona 1, Intarpiraayiziin Driiliingii Oromiyaa Birrii 300,000, Koomiishiniin Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa Birrii 263649.16, Koomiishiniin Hoggansa Sodaa Balaa Oromiyaa Birrii 234,872, Godinni Shawaa /K/Lixaa Birrii 265,000, Sh/Lixaa Birrii 305,000, Sh/Kabaa Birrii 312,470; waligalaan Birriin miiliyoona 8,359,420 galii taasisaniiru.
Dabalataanis, Ganna kana sababa roobatiin lolaan akka miidhaa hin qaqqabsiisne, koomiishinichi ittisa duursaarratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru beeksiseera.
Oduuwwan Biroo « Paartiiwwan siyaasaa biyyaalessaa ajandaa mariif qopheessan irratti marii geggeessa jiru	Abadan, kanaan booda rakkoon akka kaleessaa deebi'ee nu hin mudatu-Preezdaant Lammaa Magarsaa »